कसरी गर्ने आकस्मिक मेकअप ? « Lokpath
२०७४, २६ माघ शुक्रवार १४:३३
कसरी गर्ने आकस्मिक मेकअप ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २६ माघ शुक्रवार १४:३३
हतारमा पार्टी एटेन्ड गर्नु छ र आफूसँग पर्याप्त मात्रामा सौन्दर्य प्रसाधन छैन भने तत्कालको समस्या समाधान गर्ने केही उपाय छन्
फाउन्डेसन सकिएको अवस्था छ भने लुज पाउडर वा कम्प्याक्ट प्रयोग गर्ने । त्यो पनि छैन भने कन्सिलरमा मोइस्चराइजर मिसाएर फाउन्डेसनजस्तै बनाउने ।
कन्सिलर सकिएको छ भने फाउन्डेसनको बिर्को वा मुखमा जमेको बाक्लो फाउन्डेसनलाई कन्सिलरजस्तै गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसलाई रिंग फिंगरको सहायताले हल्का रूपमा लगाउनु उत्तम हुन्छ ।
मस्करा छैन भने पेट्रोलियम जेली प्रयोग गर्न सकिन्छ । हातको सहाराले आइल्यासेसमा हल्का पेट्रोलियम जेली लगाउँदा पर्फेक्ट लुक्स आउँछ ।
आइलाइनरको साटो आइस्याडो प्रयोग गर्न सकिन्छ । आइलाइनर ब्रसलाई पानीमा भिजाएर डार्क कलरको आइस्याडोमा चोब्ने र डिप गरेर आइलाइनर जसरी नै आँखामा लगाउने ।
आइस्याडो सकिएको छ भने ब्रन्ज वा ब्राउन ब्लसलाई स्याडो बनाएर लगाउन सकिन्छ । यद्यपि यसलाई लगाउँदा निकै सचेत हुनुपर्छ । धेरै मात्रामा नलिई थोरै ब्लसलाई हातमा लिई अप्लाइ गर्नुपर्छ ।
हेयर सिरम नभएको अवस्थामा हेन्ड, बडी लोसन वा फेस मोइस्चराइजरलाई सिरम जसरी नै केशमा लगाउन सकिन्छ । चिपचिप हुनबाट जोगिन हातमा मोइस्चराइजरको केही थोपा राखेर रब गर्दै हल्का रूपमा लगाउने ।
आइलाइनर सुख्खा भएको छ भने त्यसको प्रयोग गर्नुअघि केहीबेर वल्बको नजिक राखिदिने ।
अफिसबाट सीधै पार्टीमा जानु छ र ब्लस घरमै बिर्सिएको भए लिपिस्टिकलाई हातमा हल्का लिने र ब्लसजस्तै गरी चिकबोनमा अप्लाई गर्ने ।
आँखाको तल्लो भागमा डार्क सर्कल देखापरेको छ भने लाइट सेडको फाउन्डेसन लगाउने । यसले डार्क सर्कल छोपिदिन्छ स्मोकी लुक्सका लागि इयर कटन बडद्वारा गाजललाई आइडिलमा रब गर्ने । ओठमा लगाइने लिप पेन्सिलको माध्यमले गाजल लगाइएको स्थानमा हल्का कोर्ने र कटन बडले स्पञ्ज गर्ने ।
अनुहार थकित देखिएको छ भने क्रिमद्वारा हल्का मसाज गर्ने जसले छालामा इन्स्टेन्ट ग्लो ल्याउँछ ।
अनुहार निन्याउरो देखिएको अवस्थामा एउटा मुलायम कपडालाई मनतातो पानीमा भिजाएर अनुहारमा राखी बिस्तारै दबाउने । यसले ब्लड सर्कुलेसन बढाएर छालालाई कसिलो बनाउँछ । त्यसपछि अनुहारमा चिसो पानी छम्कने ।
थाकेको आँखाका लागि चिसो गुलाबजलमा कपास भिजाएर १० मिनेटसम्म आँखामाथि राख्ने ।
मोइस्चराइजर नभएको अवस्थामा केश तथा छालालाई मोस्चर दिन कन्डिसनर लगाउन सकिन्छ । कन्डिसनर बडीमा लगाएर नुहाउने केश चिपचिप भैरहेको छ तर केश नुहाउने फुर्सद छैन भने हेयर ब्रसमा परफ्युम स्प्रे गरी केश ब्रस गर्ने ।
केश सुख्खा भएर फुङ्ग उडिरहेको छ भने हात पानीले भिजाएर अलिकति मोइस्चराइजर हातमा लिने र टाउकोभरि हात घुमाउने । त्यसपछि केशलाई फ्रेन्च ट्विस्ट गर्ने । १० मिनेटपछि खोल्दा केश मुलायम देखिन्छ ।
आइस्याडोमा धेरै पैसा खर्च गर्ने चाहना छैन भने कम्प्याक्ट किन्ने । यो तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ । यसको सहायताले विभिन्न सेड बनाउन सकिन्छ ।
हतारका बेला आइस्याडो स्टिक उपयुक्त हुन्छ । लगाउन सजिलो र किन्दा सस्तो पनि पर्ने आइस्याडो स्टिकले सुन्दरता बढाउन प्रशस्त मद्दत गर्छ ।
चिप्ले भिँडी खानुका फाइदा थाहा छ ? क्यान्सर फैलाउने बिषालु तत्व हटाउँछ !
काठमाडौं – तपाईको भान्सामा के पाक्यो ? आज पाकेको छैन भने भोलिबाट कहिलेकाहिँ